Shina: Iharan’ny Sivana Ny Youtube. Fa Nahoana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2018 12:21 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny 25 marsa 2009)
[Fanavaozam-baovao: 28 martsa, azo nojerena indray ny Youtube araka ny voalazan'i New York Time]
Lahatsary miresaka famoretana any Tibet
Tsy mbola mazava tsara hoe nahoana ny governemanta Shinoa no nanapa-kevitra ny hanakana ny vohikala Youtube, fa nisy tatitra nilaza fa mifandraika amin'ireo lahatsary navoakan'ireo Tibetana an-tsesitany noho ny famoretana feno herisetra nataon'ny governemanta Shinoa tamin'ny Martsa 2008 sy ny fiandohan'ny taona 2009 izany tamin'ireo Tibetana mpanao hetsi-panoherana. Nikaroka izany tamin'ny Youtube izaho ary nahita lahatsary maromaro izay navoaka tao anatin'ny andro vitsy lasa izay mikasika izany. (Misy horonantsary lava kokoa maromaro saingy “mety hanohintohina” ny mametraka azy eto …).
Tamin'ny fahitalavitra Indiana no nalefa voalohany ireo lahatsary ireo, ary mampiseho amin'ny antsipirihany ny habibiana tao Tibet tamin'ny Martsa 2008. Ankoatra izany, nitatitra ny governemanta Tibetana an-tsesitany fa 250 no maty, 1294 naratra mafy hatramin'ny Janoary 2009. Nasehony koa ny lahatsary mikasika olona iray antsoina hoe Tendar izay novonoin'ny polisy tamin'ny 14 Martsa tamin'ny herintaona. Saingy i Xinhua, masoivoho ofisialin’ ny serasera Shinoa, nilaza fa tsy sarin'i Tendar ny sary ary ireo ratra naseho dia sandoka.
Nilaza ny mpitondratenin'ny Youtube fa eo ampamerenana amin'ny laoniny ny fahazoana mijery azy ao Shina ny orinasa. Andeha hojerentsika raha tsy voatohintohina ireo horonantsary etsy ambony.
Mailaka Youtube voarindra ?
Manambara ireo mpisera aterineto ao Shina fa “voarindra” ny hafatra nalefan'izy ireo tao amin'ny Youtube. Rehefa manandrana manokatra ny hafatr'izy ireo ao amin'ny tranonkalan'ny Youtube ry zareo, dia mandefa ireto fampitandremana manaraka ireto ny mpanome tolotra aterineto, Tencent, :
Handeha ho any amin'ny tranokala tsy voaaro ianao, te-hanohy ve ianao?
Ity ambany ity ny pikantsarin'ny hafatra fampitandremana.
Mihoatra ny Mandan'i Shina
Misy tranonkala maro isan-karazany manampy ireo mpisera aterineto hihoatra ny Manda Aro Afo Lehibe (sivana) ahafahana miditra amin'ny tranokala voasakana. Azonao atao ny manandrana an'ity iray ity amin'ny seawe.nett, na ny fomba mivantana kokoa ao amin'ny fuckGFW (amin'ny teny Shinoa ihany).
Timor Atsinanana 5 andro izay